ငါရာသီ2လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားသူများကိုသင်ထွက်ခွာသင့်တယ်ထင်ပါတယ် - Netflix မူရင်း
ငါရာသီ2လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားသူများကိုသင်ထွက်ခွာသင့်တယ်ထင်ပါတယ်
တိရော်ဘင်ဆင်ပုံကြမ်းစီးရီး - မင်းထွက်သင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် - Credit: Netflix
ရာသီ (၃) အပြီးတွင်အဆုံးသတ်သည်အထိအဆုံးသတ်သည်: Netflix သည်နောက်ဆုံးရာသီအတွက်စီးရီးကိုအသစ်ပြန်စသည် The CW စီးရီးကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက် Netflix သည် Katy Keene ကိုကယ်တင်သင့်သည်
ရာသီ ၂ မှသင်ထွက်ခွာသင့်သည်ဟုသင်ထင်သည်
အရိုးတွေကသူတို့ပိုက်ဆံပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Netflix ၏မူရင်းစီးရီး ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် တိရော်ဘင်ဆင်နှင့်အတူ ယခုရာသီတစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျဆင်းဖွယ်ရှိသည်ဟုဒုတိယရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည် အမျိုးမျိုး ။ ငါခရစ္စမတ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အစောပိုင်းကလာပုံပါဘဲ။
Rick နှင့် Morty ရာသီ4ဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ ကိုကြည့်ပါ
နာမည်ကြီး Netflix စီးရီးသည်လူကြိုက်များသောလူများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဗဟိုပြုသည့်ပုံကြမ်းဟာသမျိုးစုံပြပွဲဖြစ်သည်။ ဤပုံကြမ်းအများစုသည်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည် SNL နာမည်ကျော် Tim Robinson, Vanessa Bayer၊ Sam Richardson, Will Forte, Andy Samberg, Cecily Strong နှင့်အခြားသောသူများအပါအ ၀ င် stars ည့်သည်ကြယ်များစာရင်းနှင့်အတူ။ အဆိုပါပြပွဲကိုရော်ဘင်ဆင်နှင့်ဇာချန်ကင်တို့မှဖန်တီးထားပြီး Lonely Island မှပူးတွဲထုတ်လုပ်သည်။
Netflix တွင်ရာသီ ၂ ရက်ထွက်မည့်နေ့ကိုသင်ချန်ထားရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်
Netflix သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဖြန့်ချိရန်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လတွင်စီးရီးကိုအသစ်ပြန်ချခဲ့သည်။
အရ Geek ၏ Den Rich ည့်သည်ဖြစ်သည့်ကြယ်ပွင့် Sam Richardson နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် ရာသီ ၂ သည်ယခုနှစ်မတ်လတွင်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် - ထိုနေရာသည် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသခြင်း၏အခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာလူစီဖာ netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
ပြပွဲ၏ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအခြေအနေသည်၎င်းကိုယခုနှစ် Netflix ဖန်သားပြင်သို့မျှော်မှန်းထားသည့်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုလုံခြုံစွာနှင့်ဂရုတစိုက်ပြန်လည်စတင်နိုင်သည့်အချိန်တွင်၊ Netflix ကလုပ်လိမ့်မည် ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် ရာသီ2က၎င်း၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးတစ်ခု။
ယခုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် ရာသီဥတုအခြေအနေကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အကုန် Netflix တွင်စတင်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရိုက်ကူးမည့်အချိန်ကိုမူတည်သည်။
အဆိုးဆုံးမှာငါတို့တွေ့လိမ့်မည် ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် တစ်ချိန်ချိန် 2021 ခုနှစ်တွင်ရာသီ2။
Tim Robinson သည် ၂။ ရာသီအလိုက် stars ည့်သည်အဖြစ်ကြယ်ပွင့်များအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပြန်လာပြီးမျှော်လင့်နေလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ခရစ်စမတ်ဆိုက်ဘာ့ဂ်ဟာလေထဲမှာတက်နေတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏အပြည့်အဝသွန်းသိစေပါလိမ့်မယ် ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် ရာသီဥတုအခြေအနေ ၂ ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ!
ငါရာသီ2နောက်တွဲယာဉ်သင်ထားခဲ့သင့်တယ်ထင်ပါတယ်
ဘာမှမ ကျနော်တို့များအတွက်နောက်တွဲယာဉ်မျှဝေဖို့သေချာပါလိမ့်မယ် ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် Netflix ကဖြန့်ချိသည့်အခါရာသီ 2!
ထိုအတောအတွင်း, ပထမရာသီ rewatch! ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးကလစ်များပဲ။ ဖြစ်စဉ်များအားလုံးသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ မိနစ်စီကြာမြင့်သည်။ ယင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသော၊ ပျော်စရာကောင်းသောအရသာကိုဖြစ်စေသည်။ လုပ်ပါ သင်သည်သင်၏ယောက္ခမလက်ထပ်ဖို့ရှိသည်!
ငါထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ် ရာသီ ၂ သည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောအခြေအနေတစ်ခုထူထောင်ရန်နှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏ထူးဆန်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြေအနေကိုပေးထားသောအခြေအနေများ၏ထူးဆန်းခြင်းမှတဆင့်ရှုပ်ထွေးမှုသို့တွန်းပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ တိကျသောဖော်မြူလာကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါ။ နောက်ထပ်ရှင်းပြရန်ကြိုးစားရန်မည်သည့်တရားမျှတမှုကိုမဆိုပြသခြင်းမဟုတ်ပါ။
korra ရာသီ5လွှတ်ပေးရန်နေ့၏ဒဏ္.ာရီ
ဒုတိယရာသီနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါကနောင်တွင်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ တင်မ်ရော်ဘင်ဆင်နဲ့သင်ထွက်သွားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် လာမည့်လများအတွင်းကျဆင်းလာ! ရာသီ2အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကညှိထားပါ။
ပြည်တန်ဆာရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 8 ပြန်လည်စုစည်းမှု
စကော့ 2013 Netflix မာရိပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရား
netflix အပေါ် fargo တီဗီဖြစ်ပါတယ်